PCR/RT-PCR usoro Suppliers na Factory |Ndị nrụpụta usoro China PCR/RT-PCR
RT-PCR Easyᵀᴹ I (Otu Nzọụkwụ)
◮Ngwa otu nzọụkwụ na-enyere aka ntụgharị ntụgharị na PCR ka eme ya n'otu tube.Naanị ọ ga-adị mkpa ịgbakwunye RNA template, kpọmkwem PCR primers na RNase-Free ddH2O.
◮Enwere ike ịme nyocha ọnụọgụ RNA ozugbo na ngwa ngwa.
◮Ngwa ahụ na-eji reagent transcription pụrụ iche nke Foregene yana Foregene HotStar Taq DNA Polymerase jikọtara ya na sistemu mmeghachi omume pụrụ iche iji melite arụmọrụ nkwalite na nkọwapụta mmeghachi omume ahụ nke ọma.
◮Usoro mmeghachi omume kachasị mma na-eme ka mmeghachi omume nwee mmetụta nchọpụta dị elu, nkwụsi ike na-ekpo ọkụ na-esiwanye ike, na ndidi ka mma.
RT-PCR Easyᵀᴹ II (nzọụkwụ abụọ)
◮ Usoro mmeghachi omume kachasị mma na-eme ka mmeghachi omume nwee mmetụta nchọpụta dị elu, nkwụsi ike na-ekpo ọkụ na-esiwanye ike, na ndidi ka mma.
Ezigbo oge PCR Easyᵀᴹ-Taqman
◮Mfe-2× PCR Ngwakọta iji belata njehie nnwale na oge ọrụ
◮Ihe nchekwa akọwapụtara nke ọma na mmalite Taq enzyme nwere ike igbochi nkwalite na-abụghị nke akọwapụtara yana nguzobe primer dimer.
◮Mmetụta dị elu-nwere ike ịchọpụta obere ndebiri nke ndebiri
◮Ọdịiche dị mma—dakọtara na ngwa PCR kacha adị adị
Mfe-2X PCR Ngwakọta iji belata njehie nnwale na oge ọrụ
Ihe nchekwa akọwapụtara nke ọma na mmalite Taq enzyme nwere ike igbochi nkwalite na-abụghị nke akọwapụtara yana nguzobe primer dimer.
Mmetụta dị elu-nwere ike ịchọpụta obere ndebiri nke ndebiri
Ọdịiche dị mma—dakọtara na ngwa PCR kacha adị adị
PCR Hero (Ya na Dye)
◮Ikwesị ntụkwasị obi dị elu: 6 ugboro nke enzyme Taq nkịtị;
◮Ọsọ nkwalite ngwa ngwa
◮Mgbanwe template ọzọ
◮Ịrụ ọrụ nkwalite dị elu
◮Nkwekọrịta gburugburu ebe obibi siri ike: etinye ya na 37 ° C maka otu izu, na-ejigide ihe karịrị 90% ọrụ;
◮Ọ nwere 5'→ 3' DNA polymerase ọrụ na 5'→ 3' exonuclease ọrụ, na-enweghị 3'→5' exonuclease ọrụ.
◮Usoro nkwalite PCR pụrụ iche na-eme 2 × QuickEasyTMReal PCR Mix-Taqman dakọtara karịa.
◮Hot-start Foregene HS Taq Polymerase nwere arụmọrụ nkwalite dị elu, mmetụta mmụba dị elu, yana nkọwa nkwalite dị elu.
◮2 × Ọ dị mfeTMReal PCR Mix -Taqman na-eji sistemu pụrụ iche nke Foregene kwalitere iji kwalite nghọta na nkọwapụta nke nchọpụta nyocha nke usoro, nke enwere ike iji maka mkpụrụ ndụ ihe nketa na detuo mkpebi mgbanwe ọnụọgụ nọmba wee nweta nsonaazụ ziri ezi.
◮Ngwaahịa a na-abịa na ROX n'ime ntụ ntụ ntụ, nke enwere ike iji kpochapụ ndabere mgbaàmà na njehie mgbaàmà n'etiti olulu mmiri, nke dị mma maka ndị ahịa iji na ụdị PCR dị iche iche.
Ndị dike PCR bụ ndị na-eme ihe ike
◮Ikwesị ntụkwasị obi dị elu: 6ugboro nke nkịtị Taq enzyme;
◮Ọsọ ọsọ aỌsọ nkwuputa:ọsọ nkwalite bụ 5-10sec/kb, nke bụ 6-12 ugboro nke nkịtị Taq enzyme;
◮Mgbanwe template ọzọ: ọ nwere ike rụọ ọrụ nke ọma dị iche iche dị mgbagwoju anya DNA ndebiri nwere ọdịnaya GC dị elu ma sie ike ịkwalite;
◮Nke ka eluNkwalite arụmọrụ: ọnụ ọgụgụ nke mmụba cycles dị ala karịa nke nkịtị Taq enzyme;
◮Sike nnabata gburugburu ebe obibi: etinyere na 37 Celsius C maka otu izu, na-edobe karịa90%ọrụ;
PCR Easyᵀᴹ (ya na agba)
Onye dike 2 × PCRTM Sistemụ ngwakọta nwere nnabata dị elu nye ndị na-egbochi PCR karịa sistemu PCR Mix nkịtị, ma nwee ike ịnagide PCR nkwalite dị iche iche dị mgbagwoju anya.Usoro mmeghachi omume pụrụ iche na Taq Hero dị elu na-eme ka mmeghachi omume PCR nwee nrụpụta nkwalite dị elu, nkọwapụta na uche.
Usoro mmeghachi omume pụrụ iche na arụmọrụ Taq DNA Polymerase dị elu na-eme ka mmeghachi omume PCR nwee nrụpụta nkwalite dị elu, nkọwapụta na nghọta.